မြောက်ကိုရီးယား အရေးဆွေးနွေးရန် တောင်ကိုရီးယားနှင့် အမေရိကန်တို့ ပူးတွဲလုပ်ငန်းကော်မတီ ဖ? - Yangon Media Group
မြောက်ကိုရီးယား အရေးဆွေးနွေးရန် တောင်ကိုရီးယားနှင့် အမေရိကန်တို့ ပူးတွဲလုပ်ငန်းကော်မတီ ဖ?
ဆိုးလ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၁
တောင်ကိုရီးယားနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့သည် မြောက်ကိုရီးယားအရေးဆွေးနွေးရန် ပူးတွဲလုပ်ငန်းကော်မတီကို ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်ကဖွဲ့ စည်းလိုက်ပြီဖြစ်ပြီး ယင်းကို အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပီယိုက ၎င်းသည် ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတစ်ခုနှင့် ထိပ်သီးချင်းထပ်မံဆွေးနွေးနိုင်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း အကောင်းမြင်မှတ်ချက်ချ ပြောဆိုခဲ့သည်။
တောင်ကိုရီးယား နျူကလီးယားကျွမ်းကျင်သူ ထိပ်တန်းသံတ မန်လီဒိုဟွန်းနှင့် အမေရိကန်သံ အမတ်စတီပင်ဘိုင်ဂွန်တို့ပါဝင် သော လုပ်ငန်းကော်မတီသည် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ် နျူကလီးယားကင်းမဲ့စေရေး ဆွေးနွေးပွဲများအား လွန်ခဲ့သောလများအတွင်းက လျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ဖြစ်သည်။
ယခုပူးတွဲလုပ်ငန်းကော်မတီတွင် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် လီဒွန်ယူးလ်နှင့် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရုံးမှ ဒုတိယလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အဲလက်စ်ဝမ်တို့ပါဝင်ကြပြီး ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ဆက်သွယ်ရေး ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများချမှတ်ရေး အပါအဝင် ကိစ္စရပ်များအား ဆွေး နွေးကြမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းသံတ မန်နှစ်ဦးနှင့်အတူ အမေရိကန်သမ္မတအိမ်ဖြူတော်၊ တောင်ကိုရီးယားသမ္မတရုံးနှင့် တောင်/မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံ ပြန်လည်ပေါင်း စပ်ရေးဌာနဝန်ကြီးရုံးမှ အရာရှိများပါ နောက်ရက်သတ္တပတ်အတွင်းကျင်းပမည့် ဆွေးနွေးပွဲ၌ ပါဝင်ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယမြောက် တစ်ကိုယ်တော်အခွေ ထွက်ရှိဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ - ဘီလီလမင်းအေး
လေးလကျော်ကြာ စစ်ရေးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများ ရပ်ဆိုင်းမည်ဟု တပ်မတော်ကြေညာ၊ တိုင်းပြည်ငြိမ်း?